ဟန်ငြိမ်း ဦး တင်လိုက် တဲ့ သူမ ရဲ့ အချစ် ရေး အ ကြောင်း ကို ပြော ပြလာ တဲ့ “အေးမြ ဖြူ” – Shwewiki.com
ဟန်ငြိမ်း ဦး တင်လိုက် တဲ့ သူမ ရဲ့ အချစ် ရေး အ ကြောင်း ကို ပြော ပြလာ တဲ့ “အေးမြ ဖြူ”
အနုပညာ ရှင် အတော် များများရဲ့ လျို့ဝှပ် တစ်ချို့ကို အမြဲ ထုတ်ဖော် သူ အမွှေစိန် ဟန်ငြိမ်းဦး ကတော့ မနေ့ ကတော့ အေးမြဖြူ နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖွင့်ချလာခဲ့ပါတယ်။
” အေးမြဖြူ လေး တောင် ဆို့ အောက် ဖြစ်နေပြီ..သူ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲ😍 ဒီတိုင်းလေးပဲ ထားလိုက် ပါအုံးမယ် ခလေးတွေက ငယ်သေးတော့ နားလည်ပေး လိုက်ပါနော်..။သူ့အမကိုယ်တိုင် ကလည်း မ တင်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားလိုပါ ..တွဲခဲ့တာမှန်ပေမယ့်.. ခုချိန်မှာ အနုပညာခရီးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်လေးနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းချင် လို့ပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လိုပဲ ခင်တော့မယ်တဲ့..။အားလုံး please သူ့ထက် စိတ်ဝင်စရာသတင်းတွေပဲ တင်ပေး မယ်နော်😍ဆိုပြီး ဦဟန် ဆိုသည့် Pageမှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ် ပြီး ယနေ့မှာ တာ့ အေးမြဖြူ ဟာ “အချစ်ရေးက Instock ပါ Sold မ Out ပါဘူး အမေ က မနေ့ကတောင် ပြောနေတယ်…။ နင်နာမည် ပိုကြီးပြီပေါ့ တဲ့ မစိုးရိမ်ကြ ပါနဲ့လို့ “…ဟန်ငြိမ်းဦး …..pageက တင် လိုက်တဲ့ ချစ်သူ ရှိနေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးမှ ယခုလို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီ တို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင် ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေး သွားကြပါအုံးနော်….
ဟနျငွိမျး ဦး တငျလိုကျ တဲ့ သူမ ရဲ့ အခဈြ ရေး အ ကွောငျး ကို ပွော ပွလာ တဲ့ “အေးမွ ဖွူ”
အနုပညာ ရှငျ အတျော မြားမြားရဲ့ လြို့ဝှပျ တဈခြို့ကို အမွဲ ထုတျဖျော သူ အမှစေိနျ ဟနျငွိမျးဦး ကတော့ မနေ့ ကတော့ အေးမွဖွူ နဲ့ ပတျသတျ တဲ့ အကွောငျးတှေ ဖှငျ့ခလြာခဲ့ပါတယျ။
” အေးမွဖွူ လေး တောငျ ဆို့ အောကျ ဖွဈနပွေီ..သူ့ ငယျသူငယျခငျြးနဲ့ပဲ😍 ဒီတိုငျးလေးပဲ ထားလိုကျ ပါအုံးမယျ ခလေးတှကေ ငယျသေးတော့ နားလညျပေး လိုကျပါနျော..။သူ့အမကိုယျတိုငျ ကလညျး မ တငျဖို့မတ်ေတာရပျခံထားလိုပါ ..တှဲခဲ့တာမှနျပမေယျ့.. ခုခြိနျမှာ အနုပညာခရီးကို စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့လေးနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးခငျြ လို့ပါတဲ့ မိတျဆှတှေေ လိုပဲ ခငျတော့မယျတဲ့..။အားလုံး please သူ့ထကျ စိတျဝငျစရာသတငျးတှပေဲ တငျပေး မယျနျော😍ဆိုပွီး ဦဟနျ ဆိုသညျ့ Pageမှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယျ။
ဒီသတငျးနဲ့ ပတျသတျ ပွီး ယနမှေ့ာ တာ့ အေးမွဖွူ ဟာ “အခဈြရေးက Instock ပါ Sold မ Out ပါဘူး အမေ က မနကေ့တောငျ ပွောနတေယျ…။ နငျနာမညျ ပိုကွီးပွီပေါ့ တဲ့ မစိုးရိမျကွ ပါနဲ့လို့ “…ဟနျငွိမျးဦး …..pageက တငျ လိုကျတဲ့ ခဈြသူ ရှိနပွေီ ဆိုတဲ့ သတငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အငျတာဗြူးမှ ယခုလို ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတျရှုပေးတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော တို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျ ရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီ တို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျး မြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျ ဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေး သှားကွပါအုံးနျော….
တစ်နေ့ ကျရင် အငှား ကိုယ်ဝန် ဆောင် ပေး မယ့် သူကို ရှာပြီး ကလေး လိုချင် သေးတယ် ဆို တဲ့ ဥက္ကာ မင်းမောင်
မိသားစု အခက်အခဲကြောင့် တက္က သိုလ်တက်ရောက်ရန်အခက်အ ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ( ၄ ) ဘာသာဂု ဏ်ထူးရှင် မမိုးမိုး